.त्यसपछि यी युवती युवकको घरमा पुगेकी थिईन….! – Sapana Sanjal
विकृत मानसिकताका अ’पराध’हिरुले अ’पराध पनि निकै डरलाग्दो किसिमले गर्छन् । केही अपराध त यतिसम्म भ’यानक हुन्छन् कि ती घटनाको विवरण सुन्दासमेत हाम्रो सातो जान्छ । एक व्यक्तिले यतिसम्म डरलाग्दो गरी अ’पराध गरेका छन् कि उनको अपराधबारे सुन्दा समेत सामान्य मान्छेको सातो जान्छ ।
ती व्यक्तिले १९ वर्षकी उक किशोरीलाई फकाएर आफ्नो घरमा बोलाए । त्यसपछि उनले ती किशोरीलाई कर णी गरे । उनले गरिसकेपछि उनले किशोरीको टा’उ’को का’ ‘टे । उनको शवका सबै औं’लाका न’ङ’हरु उ’खेले, सबै दाँ’त भाँ’चे’र प्ला’स्टि’कको झोलामा राखे ।
उनको का’टि’ए’को टा’उ’को’लाई पानीमा हा’लेर उ’मा’ले । बाँकी रहेको शवका पनि सबै हातखुट्टा का’ ‘टे । द सनको रिपोर्टअनुसार सुन्दासमेत सातो जाने योघटना कजाखस्तानमा भएको हो ।
घटनाका संदिग्ध आ’रोपीलाई पक्राउ गरिएको छ । उनीमाथि १९ वर्षकी फेसन डिजाइनकी विद्यार्थी अयजान एडिलोभाको ज्या ‘न लि’एको आरोप छ । अलमाटी सहरको स्थानीय कपडा सिलाउने पसलमा काम गर्ने ती किशोरी बे ‘पत्ता भएको रिपोर्टपछि खोजी गर्ने क्रममा उनको यस्तो बि’जोग अव’स्थामा शव यी आ’रोपीको घरमा फेला परेको थियो । पीडित किशोरीका दाजु अलमात मुलिकोभले यो जघन्य घटनाबारे मिडियालाई बताएका हुन् ।
‘उसले मेरी बहिनीलाई मा’ ‘र्यो र करिब २४ घण्टासम्म उनको श’रीर टु’ ‘क्रा ‘पा’र्दै बस्यो’ उसले टाउको फु ‘टा’यो’ र उ’मा’ल्यो ।’ पुलिसले अनुसन्धानका क्रममा पीडित किशोरी हराउनुभन्दा अगाडि सामाजिक संजालमार्फत आरोपीसँग सम्पर्कमा रहेको फेला पारेको छ ।
म्यासेजमा आरोपीले अयजानलाई आफ्नो घरमा आएर नयाँ सुटको लागि नाप लिन भनेका थिए र अयजान मार्च १९ मा आउन सहमत भएकी थिइन् । आर्च १९ कै दिन उनी बे ‘पत्ता भएकी थिइन् ।
सिसिटिभी फुटेजमा अयजान र आरोपी घरको लिफ्टमा साथमा प्रवेश गरेको देखिएको छ । आरोपीको घरमा पुलिस पुग्दा आ’रोपीले ढोका नखोलेपछि पुलिसले ढोका फु’टाउ’नुपरे’को थियो ।
रिपोर्टका अनुसार पुलिस देखेपछि आ’रोपीले आफ्नै घाँ’ ‘टी का’ ‘टेका थिए । मेडिकल डिग्री लिएका ती आ’रोपीको उपचार भइरहेको छ । सोधपुछका क्रममा आरोपीले श ‘व टु ‘क्रा टु ‘क्रा पा’रे’र शहरका विभिन्न ठाउँमा भएका फोहरका क’न्टेनरमा फाल्दै अ ‘परा’ध लुकाउने प्रयास गरेको स्वी’कार गरेका छन् । पहिचान नहोस् भनेर उनले पीडितको टाउको उ’माल्ने प्र’यास गरेका थिए ।
यो पनि : छोराको विवाह गर्न पुगेका बुवा सम्धीनी लिएर फरार
भारतको गुजरातमा भएको एक घटनाले त्यहाँका मानिसहरु अचम्ममा परेका छन् । सो घटनाले प्रेम अन्धो हुन्छ भन्ने हरफलाई सत्य सावित गरेको छ ।
विवाहका लागि केटा पक्ष र केटी पक्ष दुवै राजीखुशी थिए तर अचम्मत तब भयो जब दुलाहाका बुबा र दुलहीकी आमा बे’पत्ता भए । विवाहको एक हप्ता अगाडिनै दुलाहाका बुबाले सम्धीनी भगाएपछि उनीहरुको बिहे स्थगित भएको छ । बेहुलाका ४८ वर्षीय बुबा व्यापारी हुन् भने बेहुलीकी ४६ वर्षीया आमा राजनीतिक पार्टीकी कार्यकर्ता हुन् ।
Nextरुघा र जोरो त हो दुईचार दिन घरमै हेरौं भन्दै बसेका भुपालको अचानक मृत्यु
ललितपुरबाट पोखरा बोलाएर नुभिवलाइ आफ्नै साथीले…. (629)